1-3. Chii chakaparira kukura munhamba kwemhuri dzine mubereki mumwe, uye avo vanobatanidzwa vanotapurwa sei?
MHURI dzine mubereki mumwe dzakanzi “rudzi rwemhuri rwunokura nokukurumidza zvikurusa” muUnited States. Mamirire acho ezvinhu akafanana mune dzimwe nyika dzakawanda. Nhamba hurusa yechatanuro, kutizwa, kuparadzana, uye vana vanoberekwa zvisiri pamutemo zvakava nemigumisiro inotapura zvikuru nokuda kwamamiriyoni avabereki navana.
2 “Ndiri chirikadzi ine makore 28 okukura ine vana vaviri,” vakanyora kudaro vamwe amai vasina kuroorwa. “Ndakaora mwoyo zvikuru nokuti handidi kurera vana vangu pasina baba. Kunoratidzika kuti hakuna munhu anombondiitira hanya. Vana vangu vanondiona ndichichema kazhinji kazhinji uye kunovatapura.” Kunze kwokurwisana nemirangariro yakadai sehasha, kuva nemhaka, uye ushoma, vabereki vasina mumwe vazhinjisa vanotarisana nedenho yezvose zviri zviviri kushanda kunze kwomusha nokuita mabasa omumba. Mumwe akati: “Kuva mubereki mumwe kwakafanana nokuva muvaraidzi anokandira zvinhu mumhepo. Pashure pemwedzi mitanhatu yerovedzo, pakupedzisira unokwanisa kukanda mabhora mana panguva imwe cheteyo. Asi nokukurumidza zvikuru pashure pokunge wokwanisa kuita izvozvo, mumwe munhu anokukandira rimwe bhora!”
3 Vaduku vari mumhuri dzine mubereki mumwe kazhinji kazhinji vane nhamo dzavo vamene. Vangafanira kurwisana neshungu dzakasimba pashure pokuenda kwakamwe kamwe kwomubereki kana kuti rufu. Nokuda kwepwere dzakawanda kusavapo kwomumwe mubereki kunoratidzika kuva kune tapuro yakaipa zvikuru.
4.Tinoziva sei kuti Jehovha anoitira hanya mhuri dzine mubereki mumwe?
4 Mhuri dzine mubereki mumwe dzaivapo munguva dzeBhaibheri. Magwaro anodudza adudzazve “nherera” uye “chirikadzi.” (Eksodho 22:22; Dheuteronomio 24:19-21; Jobho 31:16-22) Jehovha Mwari akanga achiitira hanya mamiriro avo ezvinhu akaipa. Wezvamapisarema akadana Mwari kuti “baba venherera, nomutongi wemhosva dzechirikadzi.” (Pisarema 68:5) Zvirokwazvo, Jehovha anoitira hanya zvimwe chetezvo nokuda kwemhuri dzine mubereki mumwe nhasi! Zvirokwazvo, Shoko rake rinopa nheyo dzinogona kudzibetsera kubudirira.
KUDZIDZA KUITA MABASA EMHURI
5. Chinetsoi icho vabereki vasina mumwe vanofanira kutarisana nacho pakutanga?
5 Rangarira basa rokutarisira musha. “Kune nguva dzakawanda apo unoshuva kuti kudai murume aivapo,” anobvuma kudaro mumwe mukadzi akachatanurwa, “saapo motokari yako inotanga kurira uye usingazivi kuti kuri kubva kupi.” Varume vachangobva kuchatanurwa kana kuti kufirwa nomudzimai nenzira yakafanana vangavhiringidzwa namabasa akawanda emhuri ayo vanofanira kuita zvino. Nokuda kwavana, uyanga hwomumba hunowedzera kumirangariro yokusagadzikana nokusachengeteka.
6, 7. (a) Muenzanisoi wakaisvonaka wakagadzwa no“mukadzi unoita zvakanaka” webhuku raZvirevo? (b) Kuva anoshingaira pamusoro pamabasa omumba kunobetsera sei mumisha ine mubereki mumwe?
6 Chii chinogona kubetsera? Cherekedza muenzaniso wakagadzwa no“mukadzi unoita zvakanaka” anorondedzerwa pana Zvirevo 31:10-31. Ukuru hwamabasa ake hunoshamisa—kutenga, kutengesa, kusona, kubika, kutenga minda, kurima, uye kutarisira bhizimisi. Chii chakaita kuti abudirire? Akanga achibishaira, achishanda kusvikira usiku uye achikurumidza kumuka kuti atange mibato yake. Uye akanga akasanorongeka, achigovera vamwe mamwe mabasa nokushandisa maoko ake amene kutarisira mamwe acho. Hakushamisi kuti iye akarumbidzwa!
7 Kana iwe uri mubereki mumwe, shingairira mabasa ako omumba. Wana gutsikano mubasa rakadaro, nokuti ikoku kunoita zvakawanda kuwedzera kumufarwa wavana vako. Zvisinei, kugadzirira kwakafanira nokuronga zvinokosha. Bhaibheri rinoti: “Ndangariro dzavashingairi dzinouyisa zvizhinji.” (Zvirevo 21:5) Vamwe baba vari voga vakabvuma, kuti: “Handifungi pamusoro pezvokudya kutozosvikira ndava nenzara.” Asi zvokudya zvakagadzirirwa zvinovaka muviri zvikuru uye zvinofadza kupfuura izvo zvinogadzirwa nokukurumidza. Ungafanirawo kudzidza mabasa matsva. Kupfurikidza nokubvunza shamwari dzinoziva, mabhuku ane mirayiridzo, uye nyanzvi dzinobetsera, vamwe vanaamai vari voga vakakwanisa kupenda, kugadzira pombi, uye kugadzira mota kuduku.
8. Vana vane vabereki vasina mumwe vanogona sei kubetsera mumusha?
8 Kwakanaka here kukumbira vana kubetsera? Vamwe amai vari voga vakarangarira, kuti: “Unoda kutsiva kusavapo kwomumwe mubereki kupfurikidza nokuita kuti vana varerukirwe.” Ikoko kunganzwisisika asi zvichida hakunakiri mwana nguva dzose. Pwere dzinotya Mwari dzomunguva dzeBhaibheri dzaigoverwa mabasa akafanira. (Genesi 37:2; Rwiyo rwaSoromoni 1:6) Naizvozvo, kunyange zvazvo uchingwarira kusanyanyoremedza vana vako, uchava akachenjera kuvagovera mabasa akadai sokusuka ndiro nokuchengeta kamuri ravo rakachena. Kuregererei kuita mamwe mabasa pamwe chete? Ikoku kunogona kuva kunofarikanywa zvikuru.
DENHO YOKUWANA CHOKURARAMA NACHO
9. Neiko vanaamai vari voga vachiwanzotarisana nenhamo dzemari?
9 Vabereki vasina mumwe vazhinjisa vanokuwana kwakaoma kuwana mari yezvinodikanwa zvavo, uye vanaamai vaduku vasina kuroorwa kazhinji kazhinji vanova nenguva yakaoma zvikuru. * Munyika umo kubatsirwa nehurumende kunowanika, vangava vakachenjera kukushandisa, kutozosvikira vagona kuwana basa. Bhaibheri rinobvumidza vaKristu kushandisa gadziriro dzakadaro apo kunenge kuri madikanwa. (VaRoma 13:1, 6) Chirikadzi navakadzi vakachatanurwa vanotarisana nedenho dzakafanana. Vakawanda, vamanikidzwa kushandazve pashure pamakore akawanda okushanda pamusha, vanogona kazhinji kazhinji kuwana basa rinobhadhara zvishoma bedzi. Vamwe vanokwanisa kuvandudza muraramiro wavo kupfurikidza nokunyoresa muzvirongwa zvokurovedza basa kana kuti kosi dzechikoro dzenguva pfupi.
10. Amai vari voga vanogona sei kutsanangura kuvana vavo chikonzero nei vachifanira kuwana basa rokunyika?
10 Usashamiswa kana vana vako vakasafara apo unotsvaka basa, uye usanzwa une mhaka. Panzvimbo pezvo, vatsanangurire chikonzero nei uchifanira kushanda, uye vabetsere kunzwisisa kuti Jehovha anoda kuti uvariritire. (1 Timotio 5:8) Pashure penguva yakati, vana vazhinjisa vanochinja. Zvisinei, edza kupedza nguva yakawanda unavo seiyo inobvumira rudungwe rwako rwokubatikana. Ngwariro yorudo yakadaro inogona kubetserawo kuderedza tapuro dzeganhuriro dzipi nedzipi dzemari idzo mhuri ingava nadzo.—Zvirevo 15:16, 17.
NDIANI ARI MUTARISIRI?
11, 12. Miganhui iyo vabereki vasina mumwe vangafanira kuchengeta, uye vanogona sei kuita saizvozvo?
11 Ndokwomuzvarirwo kuti vabereki vasina mumwe vave pedyo zvikuru navana vavo, bva ngwariro inofanira kushandiswa yokuti miganhu yakagoverwa naMwari pakati pavabereki navana haipunziki. Somuenzaniso, zvinetso zvakakomba zvinogona kumuka kana amai vari voga vachikarira mwanakomana wavo kuita mabasa omurume wemba kana kuti kubata mwanasikana wavo sowokuvimba naye, vachiremedza musikana wacho nezvinetso zvakavanzika. Kuita saizvozvo hakuna kufanira, kunodzvinyirira, uye zvichida kunovhiringidza kumwana.
12 Vimbisa vana vako kuti iwe, somubereki, uchavatarisira—kwete zvakapesana. (Enzanisa na2 VaKorinte 12:14.) Padzimwe nguva, ungada zano kana kuti tsigiro. Ritsvake kuvakuru vechiKristu kana kuti zvichida kuvakadzi vechiKristu vakakura mumudzimu, kwete kuvana vako vaduku.—Tito 2:3.
13. Chinetsoi pamusoro pechirango icho amai vari voga vangatarisana nacho?
13 Murume angava nechinetso chiduku chokurangarirwa zvakakomba somurangi, asi mukadzi angava nezvinetso muna ikoku. Vamwe amai vari voga vanoti: “Vanakomana vangu vane miviri yavarume vakuru namanzwi avarume vakuru. Pane dzimwe nguva kwakaoma kusanzwika usingasarudzi kana kuti wakaneta mukuenzaniswa.” Kupfuurirazve, ungave uchiri kutambudzika pamusoro porufu rwomukwanyina anodiwa, kana kuti zvichida ungave uchinzwa une mhaka kana kuti une hasha pamusoro pokupunzika kweroorano. Kana muchigoverana kuchengeta, ungatya kuti mwana wako anoda kuva neaichimbova mukwanyina wako. Mamirire ezvinhu akadaro anogona kukuita kuti kuome kupa chirango chakadzikama.
14. Vabereki vasina mumwe vanogona sei kuchengeta murangariro wakadzikama wechirango?
14 Bhaibheri rinotaura kuti “mwana wangoregwa hake unonyadzisa [a]mai vake.” (Zvirevo 29:15) Une tsigiro yaJehovha Mwari mukuita mitemo yemhuri nokuita kuti ichengetwe, naizvozvo usatera kukuva nemhaka, kukuzvidemba, kana kuti kurutyo. (Zvirevo 1:8) Usatongobvumiranise nheyo dzeBhaibheri pane zvisina kufanira. (Zvirevo 13:24) Edza kuva ane mufungo, anotsinhirana, uye akatsiga. Pashure penguva yakati, vana vazhinjisa vachaita chimwe chinhu. Zvisinei, uchada kurangarira mirangariro yavana vako. Vamwe baba vari voga vanoti: “Chirango changu chaifanira kudzikamiswa nokunzwisisa nemhaka yekatyamadzo yokurasikirwa naamai vavo. Ndinotaura kwavari pamukana uri wose. Tinova ne‘nguva dzekurukurirano dzakavandika’ apo tinogadzira chirariro. Ndipo panguva iyoyo apo vanondiudza zvakavanzika chaizvo zvavo.”
15. Mubereki akachatanurwa anofanira kudzivisei pakutaura nezveaichimbova mukwanyina?
15 Kana wakachatanurwa, hapana chinhu chakanaka chinoitwa kupfurikidza nokusekesa kuremekedzwa kweaichimbova mukwanyina wako. Kutukana kwavabereki kunorwadza vana uye pakupedzisira kuchanetesa kukuremekedzai mose muri vaviri. Nokudaro, dzivisai kuita tsinhiro dzinokuvadza dzakadai: “Wakafanana chaizvo nababa vako!” Marwadzo api kana api ayo aichimbova mukwanyina wako akakuparira, achiri mubereki womwana wako, uyo anoda rudo, ngwariro, uye chirango chavabereki vose vari vaviri. *
16. Igadziriroi dzomudzimu dzinofanira kuva rutivi rwenguva dzose rwechirango mumusha momubereki mumwe?
16 Sezvakakurukurwa mumaganhuro akapfuura, chirango chinobatanidza kurovedza nomurayiridzo, kwete panichi chete. Zvinetso zvakawanda zvinogona kudziviswa nechirongwa chakanaka cherovedzo yomudzimu. (VaFiripi 3:16) Kupinda misangano yechiKristu nguva dzose kunokosha. (VaHebheru 10:24, 25) Ndozvakaitawo kuva nefundo yeBhaibheri yemhuri yevhiki nevhiki. Chokwadi, hakusi nyore kuchengeta fundo yakadaro ichipfuurira. “Pashure pebasa rezuva, unoda chaizvoizvo kuzorora,” vakadaro vamwe amai vanongwarira. “Asi ndinozvigadzirira ndimene mundangariro kuti ndifunde nomwanasikana wangu, ndichiziva kuti ndichimwe chinhu chinofanira kuitwa. Anofarikanya chaizvoizvo fundo yedu yemhuri!”
17. Chii chatinogona kudzidza mukurerwa kweshamwari yaPauro Timotio?
17 Shamwari yomuapostora Pauro Timotio sezviri pachena yakapiwa rovedzo yayo munheyo dzeBhaibheri naamai vayo naambuya vayo—asi sezviri pachena kwete nababa vayo. Bva, Timotio akava muKristu akatanhamara zvakadini! (Mabasa 16:1, 2; 2 Timotio 1:5; 3:14, 15) Iwe unogona nenzira yakafanana kukarira migumisiro yakanaka sezvo unovavarira kurera vana vako “muchirango nokutungamirira ndangariro kwaJehovha.”—VaEfeso 6:4, NW.
KUKURIRA KURWISANA NOUSHOMA
18, 19. (a) Ushoma hunogona sei kuzviratidzira humene nokuda kwomubereki mumwe? (b) Izanoi rinopiwa kubetsera kudzora zvishuvo zvenyama?
18 Mumwe mubereki mumwe akagomera, achiti: “Apo ndinouya kumusha ndokuziva kuti ndiri ndoga, uye zvikurukuru pashure pokunge vana vavata, ushoma hunouya.” Hungu, ushoma hunowanzova chinetso chikurusa icho mubereki mumwe anowanzotarisana nacho. Muzvarirwo kushuva ushamwari hwakanaka noushamwaridzani hweroorano. Asi munhu anofanira here kuedza kupedza ichi chinetso pasinei zvapo nechinoitika? Muzuva romuapostora Pauro, dzimwe chirikadzi duku dzakabvumira “kuda kwadzo vatano kuva pakati padzo naKristu.” (1 Timotio 5:11, 12, NW) Kubvumidza zvishuvo zvokunyama kukurira fariro dzomudzimu kwaizova kunokuvadza.—1 Timotio 5:6.
19 Mumwe murume wechiKristu akati: “Kuda vatano kwakasimba zvikuru, asi unogona kukudzora. Apo mufungo unopinda mundangariro mako, haufaniri kuufungisisa. Unofanira kuubvisa. Kunobetserawo kufunga nezvomwana wako.” Shoko raMwari rinopa zano, kuti: ‘Urayai mitezo yomuviri wenyu kana toreva nezvechishuvo chevatano.’ (VaKorose 3:5) Kudai uri kuedza kuuraya chishuvo chako chezvokudya, ungarava here magazini anoratidzira mifananidzo yezvokudya zvakanaka, kana kuti ungasonganirana here navanhu vanotaura nguva dzose pamusoro pezvokudya? Nyangwe! Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi nezvezvishuvo zvenyama.
20. (a) Ingozii yakavandira avo vanonyenga vasiri vatendi? (b) Vanhu vasina kuroora kana kuti kuroorwa mose muri muviri muzana rokutanga ramakore uye nhasi vakarwisana sei noushoma?
20 Vamwe vaKristu vakanyengana navasingatendi. (1 VaKorinte 7:39) Ikoko kwakapedza chinetso chavo here? Aiwa. Mumwe mukadzi wechiKristu akachatanurwa akanyevera, kuti: “Kune chinhu chimwe chakaipa zvikuru kupfuura kuva asina kuroorwa. Ndiko kuroorwa nomunhu asina kururama!” Chirikadzi dzechiKristu dzomuzana ramakore rokutanga pasina panikiro dzaiva nenguva dzoushoma, asi dzakachenjera dzairamba dzakabatikana ‘dzichivaraidza vaenzi, dzichishambidza tsoka dzavatsvene, uye dzichinyaradza avo vaitambudzika.’ (1 Timotio 5:10) VaKristu vakatendeka nhasi avo vakamirira makore akawanda kuti vawane mukwanyina anotya Mwari vakaramba vakabatikana nenzira yakafanana. Imwe chirikadzi yechiKristu ine makore 68 okukura yakatanga kushanyira dzimwe chirikadzi panguva ipi kana ipi apo yaiva noushoma. Yakati: “Ndinowana kuti kupfurikidza nokuita idzi shanyo, kuramba ndichiita basa rangu romumba uye kutarisira umudzimu hwangu handina nguva yokuva noushoma.” Kudzidzisa vamwe pamusoro poUmambo hwaMwari ibasa rakanaka rinobetsera zvikuru.—Mateo 28:19, 20.
21. Munyengetero nesonganiro yakanaka zvinogona sei kubetsera kukurira ushoma?
21 Sezvinobvumwa, hapana mushonga wapakarepo woushoma. Asi hunogona kutsungirirwa nesimba rinobva kuna Jehovha. Simba rakadaro rinouya apo muKristu “anopfuurira mumikumbiro neminyengetero usiku nemasikati.” (1 Timotio 5:5, NW) Mikumbiro zvichemo zvapachokwadi, hungu, kukumbira betsero, zvichida nokuchema kwakasimba nemisodzi. (Enzanisa naVaHebheru 5:7.) Kudurura mwoyo wako kuna Jehovha “usiku namasikati” kunogona kubetsera chaizvoizvo. Uyezve, songaniro yakanaka inogona kuita zvakawanda kubvisa ushoma. Kupfurikidza nesonganiro yakanaka, munhu anogona kuwana “shoko rakanaka” rekurudziro rinorondedzerwa pana Zvirevo 12:25, NW.
22. Irangariroi dzichabetsera apo mirangariro youshoma inooneka panguva nenguva?
22 Kana mirangariro youshoma ikaoneka panguva nenguva—sezvo sezvingabvira ichaoneka—yeuka kuti hakuna munhu ane mamiriro ezvinhu akakwana muupenyu. Zvirokwazvo, “sangano rose rehama dzako” riri kutambura munzira yakati. (1 Petro 5:9, NW) Dzivisa kuramba uchifunga nguva yakapfuura. (Muparidzi 7:10) Hwirudzura zvimuko zvaunofarikanya. Kupfuura zvose, iva akatsunga kuchengeta perero yako nokuita kuti mwoyo waJehovha ufare.—Zvirevo 27:11.
KUBETSERA KUNOGONA KUITA VAMWE
23. Mutoroi une vaKristu biyavo kuvabereki vasina mumwe vari muungano?
23 Tsigiro nebetsero zvavaKristu biyako zvinokosha. Jakobho 1:27 inoti: “Kunamata, kwakarurama, kusina mhosva pamberi paMwari wedu naBaba, ndiko kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo.” Hungu, vaKristu vanosungirwa kubatsira mhuri dzine mubereki mumwe. Ndedzipi dziri dzimwe nzira dzinoshanda umo ikoku kungaitwa?
24. Mhuri dzine mubereki mumwe dzinoshayiwa dzingabetserwa munzirai?
24 Betsero yokunyama inogona kupiwa. Bhaibheri rinoti: “Asi kana munhu ane fuma yenyika, akaona hama yake ichishayiwa, akamupfigira tsitsi dzake, rudo rwaMwari runogara seiko maari?” (1 Johane 3:17) Shoko rechiGiriki rapakuvamba nokuda kwa“akaona” rinoreva, kwete kungoringa chete, asi kutarisa kune chinangwa. Ikoku kunoratidzira kuti muKristu ane mutsa angatanga kuva akarovedzana nemamirire ezvinhu emhuri nezvinodikanwa. Zvichida vanoda mari. Vamwe vangada betsero mukugadzira zvinhu zvemhuri. Kana kuti vangangoonga zvavo kukokwa nokuda kwezvokudya kana kuti kunyange kutandara.
25. VaKristu biyavo vangaratidza sei tsitsi kuvabereki vasina mumwe?
25 Mukuwedzera, 1 Petro 3:8 inoti: “Muve nomwoyo mumwe mose, munzwirane ngoni, mude hama, muve nomwoyo munyoro.” Mumwe mubereki mumwe ane vana vatanhatu akati: “Kwave kwakaoma uye pane dzimwe nguva ndinoora mwoyo. Zvisinei, panhambo nenhambo imwe yehama kana kuti yehanzvadzi ichati kwandiri: ‘Joan, uri kuita basa rakanaka. Mugumisiro uchava wakarifanira.’ Kungoziva chete kuti vamwe vari kufunga nezvako uye kuti vanoitira hanya kunobetsera zvikuru.” Vakadzi vechiKristu vakura vangava vanobudirira zvikuru mukubetsera vakadzi vaduku avo vari vabereki vari vamwe, vachiteerera apo vanenge vane zvinetso zvingava zvakavaomera kukurukura nomurume.
26. Varume vakakura mumudzimu vechiKristu vanogona sei kubetsera nherera?
26 Varume vechiKristu vanogona kubetsera mudzimwe nzira. Murume akarurama Jobho akati: “Ndairwira . . . nhererawo, nowaishayiwa mubatsiri.” (Jobho 29:12) Vamwe varume vechiKristu nhasi nenzira yakafanana vanofarira zvakanaka nherera ndokuratidza “rudo [rwechokwadi] runobva pamwoyo wakachena,” rusina vavariro dzoudyire. (1 Timotio 1:5) Vasingaregeredzi mhuri dzavo vamene, vangaronga panhambo nenhambo kushanda navaduku vakadaro muushumiri hwechiKristu uye vangavakokawo kugoverana mufundo yemhuri kana kuti munhandaro. Mutsa wakadaro ungagona kusanonunura zvikuru nherera mukusindimara.
27. Vabereki vasina mumwe vanogona kuva nechokwadi netsigiroi?
27 Pakupedzisira, chokwadika, vabereki vasina mumwe vanofanira ku‘takura mutoro wavo vamene’ webasa. (VaGaratia 6:5) Kunyange zvakadaro, vanogona kuda hama dzechiKristu nehanzvadzi uye Jehovha Mwari amene. Bhaibheri rinoti nezvake: “Jehovha unotsigira nherera nechirikadzi.” (Pisarema 146:9) Netsigiro Yake yorudo, mhuri dzine mubereki mumwe dzinogona kubudirira!
^ ndima 9 Kana muKristu muduku akava napamuviri nemhaka younzenza, ungano yechiKristu haitongofuratiri izvo anenge aita. Asi kana achipfidza, vakuru veungano navamwe vari muungano vangada kumupa betsero.
^ ndima 15 Hatisi kunongedzera kumamirire ezvinhu umo mwana angafanira kudzivirirwa pamubereki anonetsa. Uyewo, kana mumwe mubereki achiedza kunetesa chiremera chako, zvichida nomurangariro wokunyengetedza vana kukusiya, kungava kwakanaka kutaura kushamwari dzine ruzivo rwokuzviwanira, vakadai savakuru vari muungano yechiKristu, nokuda kwezano pamusoro pemabatirwe emamirire ezvinhu acho.
IDZI NHEYO DZEBHAIBHERI DZINOGONA SEI KUBETSERA . . . VABEREKI NAVANA KUPEDZA ZVINETSO ZVEMHURI DZINE MUBEREKI MUMWE?
Jehovha Mwari ndi“Baba venherera, nomutongi wemhosva dzechirikadzi.”—Pisarema 68:5.
Kuronga kwakafanira kunokosha nokuda kwebudiriro.—Zvirevo 21:5.
Jehovha anotsigira kodzero yomubereki yokupa chirango chakafanira.—Zvirevo 1:8.
Chirikadzi dzechiKristu dzakachenjera dzinoramba dzakabatikana mumabasa akanaka uye dzinopfuurira mumunyengetero.—1 Timotio 5:5, 10.
Kuratidza fariro yakafanira mu“nherera nechirikadzi” rutivi rwokunamata kwechokwadi.—Jakobho 1:27.
IZVO VADUKU VANOGONA KUITA
Ko amai vako kana kuti baba mubereki mumwe here? Kana zvakadaro, chii chaunogona kuita kuti ubetsere? Kutanga, teerera. Mumhu kana kuti kuva munhurume kana kuti kuva munhukadzi hakupi mwana rusununguko rwo‘kurega mutemo waamai vake.’ (Zvirevo 1:8) Jehovha anokurayira kuteerera, uye pakupedzisira, kuita saizvozvo kuchaparira mufarwa wako.—Zvirevo 23:22; VaEfeso 6:1-3.
Tanga kuita zvinhu, uye iva anoonga. “Amai vangu vanoshanda muchipatara, uye yunifomu yavo inofanira kuchiswa. Naizvozvo ndinovachisira,” anodaro Tony. “Kunobetsera amai vangu, naizvozvo ndinokuita.” Vamwe amai vari voga vanoti: “Ndinowanzowana kuti apo ndinenge ndakaora mwoyo chaizvoizvo kana kuti ndichishatirwa nemhaka yezuva rinotambudza zvikuru kubasa ndinouya kumusha—iroro ndiro zuva iro mwanasikana wangu asarudza kuwadza tafura ndokugadzirira chirariro.”
Yeuka kuti batira pamwe yako inokosha. Pashure pebasa rezuva rakaoma, kungava kwakaomera mubereki wako kuitisa fundo yemhuri yeBhaibheri. Kana usingabatire pamwe, unoita kuti zvinhu zviipe zvikuru. Edza kuva akagadzirira apo nguva yakarongwa inosvika. Gadzirira zvidzidzo zvako pachine nguva mberi. Kupfurikidza nokuteerera, nokuonga, uye nokubatira pamwe, uchafadza mubereki wako, uye zvinotokosha zvikuru, uchafadza Mwari.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mhuri Dzine Mubereki Mumwe Dzinogona Kubudirira!
fy chits. 9 pp. 103-115